Nativity Preparatory School | Boston School Finder
Sida loodoorto Dugsigs
Sida loo Codsado Dugsiyada
Macluumaad kusaabsan Boston School Finder
Sida aan Macluumaadka Kusoo aruurino
Eeg dhammaan dugsiyada Meelaha jecelahay 0
Caqiidada/Dugsiyada Diinta4aad - 8aad
39 Lamartine Street, Jamaica Plain
Saamiga Ardayga/Macalinka N/A
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:05am-5:00pm
Lambarka Taleefanka 857-728-0031
Codsi ayaa loobaahanyahay. Dhagsii lifaaqa hoose si aad uhesho macluumaad kusaabsan diiwaangalinta.
Nativity Preparatory School waa dugsi aqoonsi haysta, lacag la'aan ah, ahna dugsi dhexe oo ay dhigtaan wiilasha dhamaan diimaha kaladuwan ee kasoo jeeda qoysaska faqiirka ah ee magaalada Boston. Waxaa dhiga macalimiin leh khibrad iyo mutawiciin go'aan leh kuwaasoo si dhaw ula shaqeeya qoysaska, dugsiga wuxuu ka shaqaynayaa sidii ardaydu guul uga gaari lahaayeen ayna ugu biiri lahaayeen dugsi sare iyo kuleejkaba. Bii'ada dugsiga Nativity oo ah mid aqoon ahaan heerkeedu sareeyo ahna mid si fiican uqalabaysan ayaa gacan ka siinaysa ardayda inay waxbarashada jeclaadaan ayna hamiyaan inay qaadaan masuuliyada hormarka bulshadooda. Sida uu qabo Dhaqanka Jesuit, dugsiga wuxuu hormariyaa kobaca caqliga, ruuxda, bulshada, iyo jirka ee ardayda taasoo kadhigaysa wiilasha magaalada Boston inay noqdaan rag dadka kale anfaca.
Bayaanka Shaqada Dugsiga
Barnaamijka maalintii oo dhan
Barnaamijka sanadkii oo dhan ah oo leh 4 asbuuc oo lagu baro waxbarashada xiliga kuleelaha
Labada Xiisadood ee Barashada Akhriska iyo Farshaxanka Luuqada
Siminaar Lagu baranaayo Qorista
Barnaamijyada Dugsiga Kahor
Albaabada waxaa la furaa 7:30; Quraac ayaa lasiiyaa ardayda kahor intaysan dugsiga bilaabin.
Ciyaaraha iyo kulanada waxaa la qabtaa Isniinta ilaa Khamiista laga bilaabo 3:30 ilaa 5:00 PM. Barnaamij casho ah iyo casharo fiidkii ladhigto ayaa la qabtaa laga bilaabo 5:00 ilaa 8:00.
Ardaydu waa inay xirtaan shaar iyo taay, buumayaal, kabaha labiska, iyo suun.
Dhamaan ardayda ayaa xaq uleh adeegyada. Waydii dugsiga aad rabto wixii tilmaamo qaas ah. Booqo Tilmaamaha Macluuaadka ELL iyo Waxbarashada Gaarka ah iyo ELL ee barta Boston School Finder si aad uhesho macluumaad dheeri ah.
Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .
Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waa iskumid dhamaan dugsiyada kujira ururkaan.
Fadlan, ogsoonoow in macluumaadka hormarka dugsiga ee hoos kuqoran uu kaliya muujinaayo natiijooyinka jiilka xigga ee MCAS ee dugsiyada maray imtixaanada Jiilka Xigga ee MCAS iyo kan dhaxal reebka ee MCAS. Haddii dugsigu laga dhigo fasalka 10aad, waxaan kudhiirigalinaa inay kafiiriyaan natiijooyinkooda legacy MCAS halkaan.
0 oo kamid ah0
Maxkamada Tijaabada ah/Dooda, Roobaatyada, Dawlada Ardayda
Ciyaaraha Kubada cagta, Kuwa Wadamada kale, Kubada Kolayga, Baseball-ka, Lacrosse
Dhamaan Xaquuqda Qoraalku waa Mid dhawrsan.
Iskaashi Aan Laleenahay